အာမခံထားသောလူနာများ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ အကြံပြုချက်များမှာ
ပြည်ပ၌ ဆေးကုသမှုသည် အကျုံးဝင်မှုရှိမရှိ သင်၏အာမခံကုမ္ပဏီနှင့် ဆက်သွယ်ပါ။
သင့်ထံမှ ကြိုတင်ငွေစိုက်ထုတ်ပေးချေထားရန် လိုမလိုနှင့် နောက်ပိုင်းတွင် ငွေပြန်ထုတ်ပေးခြင်း ရှိမရှိ သေချာအောင်စစ်ဆေးပါ။
အကယ်၍ သင့်တွင် ယခင်ကတည်းက လက်ရှိရောဂါအခြေအနေရှိခဲ့ပါက၎င်းအခြေအနေအတွက် အကျုံးဝင်မဝင် သင်၏အာမခံကုမ္ပဏီနှင့် အတည်ပြုပါ။
အာမခံလျော်ကြေးမပေးမီ သင်ပေးရမည့် ငွေပမာဏ၊ အာမခံကုမ္ပဏီနှင့်ပူးတွဲငွေပေးချေရခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော အများဆုံးရနိုင်သည့် ငွေပမာဏကို စုံစမ်းပါ။
တိုက်ရိုက်ငွေပေးချေမှုအတွက် အောက်ပါအာမခံကုမ္ပဏီများကို လက်ခံပါသည်။
ဤဆေးရုံနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားခြင်းမရှိသောပြင်ပမှ အာမခံထားရှိမှု
ဤဆေးရုံနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားခြင်းမရှိသောပြင်ပမှ အာမခံဖြင့် OPD သို့ လာရောက်မှုအပေါ် ကျသင့်ငွေကို တိုက်ရိုက်မတောင်းခံပါ။ ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကို လူနာကသာ ပေးချေရမည်။ ဆေးရုံက သင်လိုအပ်သောအထောက်အထားများကို ထောက်ပံပေးပြီး အာမခံလျော်ကြေးတောင်းဆိုမှုကို လူနာက တိုက်ရိုက် ဆောင်ရွက်ရမည်။
ဝင်ကြေးအတွက် လူနာက စရံငွေ အလုံးစုံငွေပေးချေမှုကို ကြိုတင်၍ (သို့) ဆေးရုံတက်သည့်အခါတွင် ပြုလုပ်ရသည်။ ဆေးရုံက အာမခံပေးစာရရှိရန် အာမခံကုမ္ပဏီနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ပါမည်။ အကယ်၍ ဆေးရုံက ဆေးရုံဆင်းသည့်နေ့တွင် အာမခံပေးစာ မရရှိပါက ကုန်ကျမှုအားလုံးကို ပေးချေရန် လူနာ၌ တာဝန်ရှိပြီး စိုက်ထုတ်ငွေ ပြန်ရရှိရန် လူနာက တိုက်ရိုက် ဆောင်ရွက်ရမည်။ ရက်ပေါင်း (၃၀) အတွင်း အာမခံကုမ္ပဏီထံမှ ငွေပေးချေမှုအားလုံးကို ဆေးရုံက ရရှိပါက လူနာကို ဆေးရုံမှ ငွေပြန်အမ်းပါမည်။
ဤဆေးရုံနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသော ကွန်ရက်အတွင်းရှိ အာမခံထားရှိမှု
တိုက်ရိုက် ကျသင့်ငွေတောင်းခံမှုရှိသည့် OPD သို့လာရောက်မှုအတွက် ဆေးရုံက အာမခံအကျိုးခံစားခွင့်များကို အာမခံ website မှ စစ်ဆေးခြင်း (သို့) အာမခံစာရွက်အတွက် အာမခံကုမ္ပဏီနှင့် ဆက်သွယ်၍ စစ်ဆေးခြင်း ပြုလုပ်ပေးပါမည်။
CT/MRI ကဲ့သို့သော ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ Third Party Payor ဌာနက ကြိုတင်ခွင့်ပြုစာအတွက် အာမခံကုမ္ပဏီနှင့် ဆက်သွယ်ပါမည်။
အာမခံစာရွက်မရှိပါက လူနာက စရံပေးချေရမည်။.
ဆေးရုံမဆင်းမီရက်၌ အာမခံစာရွက်ကို ဆေးရုံက ရရှိပါက စရံငွေ ပြန်ပေးပါမည်။
အပိုကျသင့်ငွေများ၊ အာမခံလျော်ကြေးမပေးမီ သင်ပေးရမည့် ငွေပမာဏ၊ အာမခံကုမ္ပဏီနှင့်ပူးတွဲငွေပေးချေရခြင်းတို့မှာ လူနာ၏တာဝန်ဖြစ်သည်။
ငွေလက်ငင်း သို့မဟုတ် ဘဏ်မှငွေလွှဲခြင်း
ထိုင်းဘတ်ငွေကိုသာ ငွေသားဖြင့်လက်ငင်းပေးချေမှု (သို့) ဘဏ်မှငွေလွှဲခြင်းကို သင်ပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း ဆေးရုံမတက်မီ ဆေးရုံဘဏ်စာရင်းထဲတွင် ငွေရောက်ရှိနေရမည် ဖြစ်သည်။
ဘဏ်အမည် Citbank, N.A.
ငွေစာရင်းအမည်: Bumrungrad Hospital Public Co., Ltd.
ဘဏ်လိပ်စာ: 399 Interchange 21 Building, Sukumvit Road, Khlong Toey-Nua, Wattana, Bangkok, Thailand 10110
ဘဏ်ဖုန်းနံပါတ်: +66 2896 3000 +66 2896 3000 +66 2896 3000
Hospital Addressဆေးရုံလိပ်စာ: 33 Sukhumvit Soi 3, Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110 Thailand
ဖော်ပြချက်: ကျေးဇူးပြု၍ လူနာအမည်အပြည့်အစုံနှင့် ဆေးရုံနံပါတ်(HN)
နမူနာ - ဂျွန်စမစ် HN: 198393973
ဘဏ်ငွေလွှဲမှတစ်ဆင့် ငွေပေးချေပါက ငွေလမ်းကြောင်း(tracking)နှင့် ငွေပေးချေမှုပြေစာအတွက် သင်၏ကိုယ်စားလှယ်ရုံးသို့ ငွေလွှဲမှုပြေစာကို ကျေးဇူးပြု၍ အီးမေးပေးပို့ပါ။
ငွေပြန်အမ်းခြင်း။ ငွေပေးချေမှုကို ငွေသားဖြင့် သို့မဟုတ် ဘဏ်မှငွေလွှဲပါက ပြန်အမ်းငွေကို ငွေသားဖြင့် သို့မဟုတ် ငွေလွှဲဖြင့် ငွေပြန်အမ်းပါမည်။ ငွေလွှဲပြန်အမ်းမှုအားလုံးသည် ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် အခကြေးငွေနှင့် ငွေလဲနှုန်းအပေါ်မူတည်သည်။
ငွေလွှဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် ဘဏ်အပေါ်မူတည်၍ ရက်(အနည်းငယ်)/ ရက်သတ္တပတ်(အနည်းငယ်) ကြာမြင့်တတ်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုနှောင့်နှေးခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် ကျေးဇူးပြု၍ ဘဏ်နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
ငွေလွှဲလုပ်ဆောင်ချိန်တွင် ငွေလဲနှုန်းနှင့် ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုအခကြေးငွေတို့အတွက် လူနာ၌ တာဝန်ရှိသည်။
ငွေလွှဲဆောင်ရွက်ခြင်းကို အပိုငွေလွှဲခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။ ကျန်းမာရေးအတွက်သာ အသုံးပြုရမည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအသုံးပြုရန်အတွက်
အွန်လိုင်းမှ အကြွေးဝယ်ကဒ်ဖြင့် ပေးချေခြင်း
သင်သည် အကြွေးဝယ်ကဒ်ကိုသုံး၍ ကြိုတင်ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။ ​​အကြွေးဝယ်ကဒ်ဖြင့် ငွေပေးချေပါက ငွေပြန်အမ်းမှုကို ငွေပြန်အမ်းသည့်နေ့ရှိ ငွေလဲနှုန်းအပေါ်မူတည်၍ အကြွေးဝယ်ကဒ်သို့ ပြန်အမ်းငွေ ထည့်ပေးပါမည်။ အောက်ဘက်ရှိဖောင်ပုံစံကို ဖြည့်သွင်း၍ ကြိုတင်ငွေပေးချေမှု ဆောင်ရွက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ကို စိတ်ချရသော အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုလမ်းကြောင်း(လင့်ခ်) ပေးပို့ပါမည်။
Deposit for medical treatment Medication အခြား